UPDATE: Maxaa ugu dambeeyay David De Gea iyo Manchester United? – Gool FM
UPDATE: Maxaa ugu dambeeyay David De Gea iyo Manchester United?
Abdirashid Mohamud July 7, 2019
(Manchester) 07 Luulyo 2019. Goolhaye David De Gea ayaa ugu dambeyn diyaar u ah inuu qalinka ku duugo heshiis cusub oo uu kusii joogi doono kooxda Manchester United.
De Gea ayaa diyaar u ah inuu aqbalo heshiiska cusub ee ay United usoo bandhigtay, iyagoo ugu dambeyn ka xalliyay cabashadiisii mushaar yarida, waxaana ay jeebka ugu shubayaan toddobaadkii £350,000, iyadoo tababaraha Man Utd uu hadda dagaal u galayo sidii uu kooxda ugu sii celin lahaa xiddigga baxsadka ah ee Paul Pogba.
Goolhayaha Spanish-ka ah ayaa 12 bilood gudahood ku noqonaya goolhayaha ugu mushaarka badan kubadda cagta dunida, taasi oo saldhig u ah in uu baaqi kusii ahaado Old Trafford.
Markii hore 28-jirkan waxa uu doonayay mushaaraad uu qaato Alexis Sanchez mid la mid ah, kaasoo toddobaadkii Red Devils ka qaata £500,000 tan iyo markii uu Arsenal kasoo tagay.
Ka dib wada hadallo cusub oo dhex maray wakiilka De Gea iyo maamulka Manchester United. xiddiggan waxa uu shan sano oo dheerraad ah sii joogi doonaa Masraxa Riyada, xilli uu hadda ku suganyahay muddo Siddeed sano.
Atletico Madrid ayuu kasoo tagay sanadkii 2011, waxaana uu noqday ugu dambeyn halbowlaha ugu muhiimsan kooxda.
Juventus oo kaga horreysa Real Madrid loollanka loogu jiro Pogba & qorshe cusub oo ay Juve la timid!
Goormee ayay Arsenal dhammeystiri doontaa saxiixa Lucas Vazquez?